Izizathu ezi-6 eziqinisekileyo zokuThenga uluhlu lwe-B2B okanye iB2C | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 21, 2014 NgoLwesihlanu, Julayi 8, 2016 Douglas Karr
Ngaba uyasiva isikhalo? Wowu.. UJenn Lisak Wenze xa eposa ku-Twitter ngeendawo zokuya uthenge uluhlu oluchanekileyo lweshishini. Isikhalo sokungonwabi sakhawuleza kwaye iarhente yethu yade yabhalwa ngokungaziphathi kakuhle ngumntu omnye. Iitweets zazihlekisa kangangokuba uJenn wasusa iTwitter kwaye wayeka incoko.
Xa uJenn wandixelela indlela endasabela ngayo, ndandicaphukile. Okokuqala, isigqebelo somntu oseqongeni othengisa kunye ithengisa idatha yayo ngokungafihlisiyo sisimanga noko. Okwesibini, impendulo ekhawulezileyo efunyanwa nguJenn yayiqondakala. Ngaphandle kobabalo lukaJenn, ukuthobeka nobuchule… abantu ababemlandela kwangoko babecinga ukuba uluhlu lwaluzakusetyenziselwa ububi.
Ukucinga ukuba ezi zintlu zaziyi-SPAM ukukhwabanisa kwabantu. Ewe… umthengisi onamava kunye ne-arhente egxile kunxibelelwano lwe-imeyile, amaqabane kwi iqonga lokuthengisa nge-imeyile, kwaye inobambiswano oluphambili kunye iqonga lonikezelo… Ngandlela thile ucinga ukuba licebo elihle ukuqala ishishini lokugaxana.
Xa bendikwishishini lemeyile ngokuthe ngqo, sathenga uluhlu olungapheliyo. U-Heck, esinye sezicwangciso-qhinga ezothusayo ezenziwa ngumkhankaso kaMongameli u-Obama yayikukuthenga izigidi zeerekhodi zolwazi lobuqu ukuphuhlisa iinkqubo zokufikelela kuluntu apho zazisengqiqweni khona… nto leyo eyamkhokelela ekubeni abethe uHillary Clinton (owayengumnikazi weenkcukacha zeDemokhrasi) kwaye akhokele phambili unyulo.
Idatha yokuthenga kufuneka ibe lutyalomali kwishishini ngalinye! Kwi-SPAM? Ngokuchasene noko!
Ukusebenzisa idatha yeshishini kwenza ukuba abathengisi benze itoni yemikhankaso ekujolise kuyo kakhulu ebanceda ukuba baphephe i-SPAM ngokupheleleyo!
Ukufaka idatha Uluhlu lwabathengi esele lukhona lunokunceda ukubonelela ngolwazi lweshishini oluhlaziyiweyo, idatha yesahlulo, ulwazi loqhakamshelwano kunye nolunye ulwazi oluphambili. Olu lwazi lunokukunceda ukuba uphuhlise imikhankaso ekujolise kuyo ngokuchanekileyo.
Ukucoca idatha inokukugcina kuludwe lwamagama amnyama, yonyuse ukufakwa kwebhokisi yakho engenayo, ikuncede uphephe amacebo okucoca i-junk, kwaye uphucule ukuhanjiswa jikelele. Idatha iyaguga-ngakumbi iidilesi ze-imeyile zeshishini apho kukho ingeniso ephezulu. Ukuthenga uluhlu oluhlaziyiweyo okanye Ukucoca uluhlu lwakho lwangoku Ungaqhuba uphuculo olukhulu kuvulekileyo, cofa amaxabiso, kunye notshintsho kwintengiso yakho ye-imeyile.
Ukufumana abafowunelwa Ukuqhubela phambili kunokunceda ukwandisa ishishini lakho. Ukuba ndisebenze nonxibelelwano kwinkampani enye kwaye saphumelela, ukufumana apho wafudukela khona kwaye ukwazisa kwakhona iimveliso kunye neenkonzo zakho kunokunceda ukubabuyisa! Ngelixa ukugcinwa kungowona mgaqo-nkqubo ubalaseleyo, ukuphinda uthethe abathengi abasaqhubele phambili kusebenza kakuhle!
Uhlalutyo lweProfayili -Uvavanyo lwabathengi kunye nokuqokelelwa kwedatha kuhle, kodwa isongezelelo sedatha sinokukunika lonke ulwazi oludingayo kwishishini lakho ukukunceda ukuqonda abo bantu okanye amashishini osele uqhuba nawo ishishini. Ubalo lwabantu kunye nefemografi inokukunceda uqonde amashishini kunye nejografi ofikelela kuyo (okanye hayi), ikuncede uphuhlise izicwangciso zomxholo ojolise kuwo, kwaye ikuncede ufumane iindlela ezifanelekileyo zentengiso zokufumana umyalezo olungileyo kumntu olungileyo.
Ishishini elitsha - uyakuqonda ukungena kwakho kwintengiso? Ngaba kukho amashishini amatsha phaya okanye amathemba amatsha ngaphandle apho onokuthi uthengise kuwo? Uluhlu lwamashishini amatsha ngumgodi wegolide kumashishini amaninzi! Ayisiyo-SPAMMING, kodwa yokufumana kunye nokwakha ubudlelwane kunye nabo. Ukuba uyiarhente ebonelela ngeenkonzo zokuthengisa kunye noyilo, ngubani olunge ngakumbi ukuthengisa ngaphandle koluhlu lwamashishini afaka isicelo kwaye afumana iilayisensi zawo zeshishini. Ungayifumana njani enye ngaphandle kokufumana idatha?
Uluhlu lweThemba -Ngaba ulishishini elithe lafumana nje iimali ezininzi zotyalo-mali? Lixesha lokuba uqale ngokufumana amathuba kunye nokuthengisa kuwo. Awunakulinda kwimizamo yokuthengisa engenayo ngaphakathi ukuze ubambe kwaye abantu bankqonkqoze emnyango wakho… uya kuphulukana nabatyali mali kunye nethuba lakho. Uluhlu lwezinto ezinokulindelwa lunokunceda iqela lakho lokuthengisa ukuba lijolise ngakumbi kwiifowuni abazenzayo kunye neposi enokuthi isebe lakho lokuthengisa linokuchukumisa. Akukho ndlela yakufezekisa oku ngaphandle kokuthengwa kwedatha.
Ngaba uthenge idatha ekujoliswe kuyo kwishishini lakho? Ndisebenze itoni yamashishini, ndisebenza kwindawo yogcino lwedatha kunye nentengiso ethe ngqo, kwaye ngoku ndikwi-intanethi. Siyayiqonda ngokupheleleyo into yokuba, imizamo esekwe kwintengiso iqhuba iziphumo zeshishini ezingakholelekiyo. Kodwa asiyazi into yokuba idatha ethengiweyo inokunceda ukuvavanya, ukuhlalutya, ukuphucula nokuphucula ukuthengisa okungcono kunye nemizamo yokuthengisa. Kukho ukubuya okuhle kwidatha ethengiweyo!
Ixhaswe ngumxhasi wethu, Ungaze uyekelele.
tags: thenga idathaThenga uluhluisongezo sedathaUkucocwa kwedathauluhlu lwe-imeyileiqulunqoishishini elitshaUhlalutyo lweprofayiliUluhlu lwethemba
Inqaku elihle uDouglas, kudala ndikhangela ulwazi malunga ne-B2B okanye i-B2C yoluhlu lwezinto ezilindelweyo ixesha elide ngoku, oku kuye kwanceda kakhulu enkosi, ndizokwabelana neqela lam.
Meyi 16, 2016 kwi-3: 45 PM
Yithande le posi uDouglas!
Ukuthengwa koluhlu lwe-imeyile kufumana i-rap embi kodwa kunokuba yindlela elungileyo yokufikelela kubaphulaphuli bakho ekujolise kubo ngelixa iinzame zokuthengisa ezingenayo zifumana umkhondo. Ndisebenzela inkampani ebizwa ngokuba yiClickback esebenza ngokukodwa neenkampani zeB2B kunye neenzame zabo zentengiso eziphuma ngaphandle.
Ngokuqinisekileyo inqaku endizakwabelana ngalo!
Meyi 16, 2016 kwi-10: 05 PM